IIMAANA Archives - Ibsaa Jireenyaa
Akka lugaatti iimaana jechuun amanuu, dhugoomsu fi mirkaneessudha.
Akka shari’aatti iimaana jechuun qalbiidhaan dhugaan amanu fi itti buluu, arrabaan dubbachuu fi qaaman hojjachuudha.
Bal’innaan hiika iimaanaa fi Islaamaa barruulee armaan gadii keessaa ni argattu. Barruulee irraa hubachuu fi sirnaan itti fayyadamuuf, dhuma irraa jalqaba. Kana jechuun “Iimaana jechuun maal jechuudha”, “Iimaana fi Islaamaa”…kan jedhu irraa jalqabuun hanga barruulee haarawa maxxanfamanitti dubbisuu dandeessu.
July 7, 2021 Sammubani 5 comments
Dhimmi hundarra barbaachisan amanti ofii sirnaan beekuu fi odeefannoo gahaa qabaachudha. Namni amanti ofii sirnaan yoo hin beekin, dukkana jireenyaa keessatti kufuun dhama’a. Dhugumatti, hiika Islaamaa fi Laa ilaah illallah beekun dirqama nama hundaati. Sababni isaas, namni addunyaa tana keessatti gammachuun kan jiraatuu fi Aakhiratti adabbii jalaa nagaha kan ittiin bahuu hiika Islaamaa fi Laa ilaah illallah beekee hojii irra yoo oolche qofaadha.
Namoonni baay’een hiikni Islaamaa maali? Laa ilaaha illallah jechuun maal jechuudha? Jedhamanii yommuu gaafataman, deebii deebisuuf ni rakkatu. Kuni takkaa beekumsi kana isaaniif ibsuu isaan bira hin geenye ta’a takkaa immoo beekumsa kana barbaadu irraa ni garagalan. Rakkoo kanaaf furmaata fiduuf kitaabni kuni haala salphaan kan qophaa’edha. Kitaaba kana keessatti hiika Islaamaa, Tawhiida, gosoota isaa, hiika Laa ilaah illallah fi ulaagaalee jecha tanaa ni argattu. Kuni hundi Qur’aana fi hadiisa sahiih irratti kan hundaa’edha.
Kitaaba kana “Mana kitaaba Al-Tawba” Masjiida Anawaar biratti argamuu keessatti ni argattu. Gara masjiida Anawaar seenuuf yommuu taatan gara mirgaatti yommuu mil’attan mana kitaaba At-Tawba (“አል-ተውባ መጽሐፍ መደብር-Al-Tewba Bookstore” jedhu ni argitu. Namni gara Finfinnee dhufu hin dandeenye warra kitaaba gurguranitti kitaaba kana agarsiisuun akka isaaf fidan gochuu danda’a.
Hojii Iimaana diigu-Kutaa 7.1
March 23, 2021 Sammubani 2 comments
Kutaa darbee irraa itti fufuun hojii iimaana diigu ni ilaalla. Kutaa kana keessatti Ka’abaan alatti wanta biraa irratti xawaafa gochuun shirkii fi hojii iimaana diigu akka ta’e ni mirkaneessinna
February 26, 2021 Sammubani 2 comments
Kutaa darbee keessatti Rabbiin ala wanta biraatiif sujuudun shirkii akka ta’e mirkaneessinee jirra. Garuu shari’aa Nabii Muhammaditiin (SAW) dura namoonni nama biraatiif sujuuda akka turan ni beekkama. Kuni akkamitti ilaallama jedhee namni gaafachu danda’a. Barreefamni gabaabdun armaan gadi kana ifa gooti.
February 8, 2021 Sammubani Leave a comment
Kutaalee darban keessatti Rabbiin ala wanta biraatiif silati seenuu fi qalma qaluun (wareegun) shirkii akka ta’e ilaalle jirra. Har’as itti fufuun Rabbiin ala wanta biraatiif sujuudu fi ruku’a bu’uun (mataan gadi jechuun) shirkii akka ta’e ni ilaalla. Isin qophiidhaa?
February 6, 2021 Sammubani 2 comments
Ji’oota muraasan dura dubbiiwwan iimaana diigan ilaalle jirra. Hojiwwan iimaana diiganiis ilaalu jalqabnee osoo hin xumurin jidduun dhiifne. Amma bakka itti dhaabne irraa jalqabuun adeemsa keenya itti fufna. In sha Allah, barruulee kanniin haala kitaabatin walitti qabuun guyyaa tokko mana kitaabaa keessatti akka argannu ni abdanna.
September 10, 2020 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti wareegni (qalmi), nazriin (silatin), sujuunni fi ruku’unni ibaadaa akka ta’an ilaalle jirra. Har’a immoo ibaadawwan kanniin Rabbiin ala wanta biraatiif gochuun shirkii akka ta’ee fi iimaana akka diigu ni ilaalla.
September 8, 2020 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti wareegni (qalmii) gosoota ibaadaa keessaa tokko akka ta’e ilaalle jirra. Qalmii ibaadaa kan ta’uu Gabbaramatti dhiyaachuuf, Isaaf gadi of qabuuf yoo niyyatameedha. Kanaafu, qalmi haala kanaan qalame Rabbii tokkichaaf malee hin ta’u. Namni qalma akkanaa Rabbiin ala wanta biraatiif godhe, shirkii hojjate jira. Kanaafu, hojiin isaa kuni hojii iimaana isaa diigudha jechuudha. Har’as itti fufuun gosoota ibaadaa biroo ilaalla. Gosoota ibaadaa sirriitti beekun keenya shirkii irraa of eeggannoo guddaa akka goonu nu gargaara.
Hojii Iimaana Diigu-Kutaa 1
September 5, 2020 Sammubani Leave a comment
Hanga ammaatti dubbii iimaana faallessuu fi diigu ilaalaa turreera. Amma immoo hojii iimaana diigu ilaalla. Akkuma seensa keessatti jenne iimaanni dubbii fi hojii of keessatti qabata. Kufriinis akkuma kana dubbii fi hojii of keessatti qabata. Akkuma iimaanni dhugoomsu qofa osoo hin ta’in, dubbii fi hojii qalbii, dubbii arrabaa fi hojii qaamolee of keessatti qabatu, kufriinis kijibsiisu qofa osoo hin ta’in, dubbii fi hojii qalbii, dubbii arrabaa fi hojii qaamolee of keessatti qabata. Akkuma keeyyattoonni Qur’aanaa fi Sunnah agarsiisan. Fakkeenyaf jecha Rabbii olta’aa:
Dubbii Iimaana Diigu-Kutaa 13.3
September 2, 2020 Sammubani Leave a comment
4-Beektonni nama amantii irraa murtii dirqamaan beekkame morme kafarsiisu irratti wali galanii jiru. Ijmaa’a (wali galtee) kana beektonni baay’een dubbatanii jiru. Isaan keessaa kanneen armaan gadiiti:
ıTTİ hAA fUFNU
August 31, 2020 Sammubani Leave a comment
Akkaataa murtii amantii irraa dirqamaan beekkaman mormuun kufrii itti ta’u